26 ka Juun Maalinta Xorriyadda Somaliland' Axmed Xasan Carwo
Friday June 26, 2020 - 13:41:56 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waa xuskii 60 naad ee maalintii xorriyadda, maalintii gumeysigu ka huleelay dalkeena ka dib qarni uu talo xumo iyo wax qabad la’aan inagu maamulay, inagu kala qaybiyey oo uu nidaam qabiilaysan oon ka bax lahayn inoo dhigay. Waa ayaan xus iyo qaiimeyn mudan, ayaan weyn oo taariikh dahab ah leh, ayaan faan faan iyo farxadi umadeyna mideysay yar iyo weyn rag iyo dumar.
Waa dharaartaan waxyeeladii dhaqdhaqnay, noqonay qaran xor ah oo ku biiray dunida xorta ah. Waa ayaanta aynu xididka u taagnay qarannimada Soomaliland. Waana iyada tan aynu u garnaqsanaa ee sharciyeynaysa qarannimadeena. 26 June 1960, rabitaanka shacbiga ayaa caydhiyey isticmaarkii Ingiris, isla rabitaanka dadweynaha ayaa sidoo kale soo celiyey kolkay fool habowday dhidib adagna u taagay qarannimada Soomaliland.
GUJI HOOS OO DHEGEYSO0 ABWAAN TIMOCADDE AHUN IYO GABAYGII CAANKA AH EE 26KA JUUN.